Afganistana : Fahatairana ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Aogositra 2018 4:57 GMT
Raha toa ka efa nalaza tany amin'ny ampahan'ny gazety tandrefana ilay lazaina hoe «lalàna mikasika ny fanolanana», miteraka adihevitra be ao amin'ny firenena ihany koa izany. Tamin'ny fomba niavaka, norakofan'ireo gazety mahazatra ny diabe nataon'ny vehivavy, saingy misy endrika ara-pivavahana mila heverina ihany koa.
Efa nanazava [amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra] ny sasantsasany amin'ireo olana ireo ny Registan.net – tsara ho fantarina, fa mikendry vitsy an'isa ara-pivavahana, ireo shiita, ilay lalàna mametra ny zon'ny vehivavy – fa somary henjana ilay olana, araka ny Hazaristan Times, mba hanamarinana ny fivoriana avo lenta niarahana tamin'ireo solombavambahoaka Hazaras. Ireo Hazara no mandrafitra ny shiita vitsy an'isa betsaka indrindra ao Afganistana. Nifantoka teo amin'i Sheikh Asif Mohsini Kandhari ny fanehoankevitr'izy ireo, mpivavaka iray izay ampangainy ho mifandray amin'i Iràna :
Nilaza ny vondrona solombavambahoaka mitsikera an'i Sheikh Asif Mohsini Kandhari fa afaka ahitsy ary tsy maintsy hatsaraina ny lalàna mikasika ny fianakaviana. Mitodika amina antsafa iray natao ho an'ny gazety tamin'ny zoma tao Kaboul, nilaza ireo solombavambahoaka Hazara fa tsy afaka ny hanapaka hevitra ny tokony ho lalàna ny mollah iray.
Tsy izany ihany anefa no olana tokana atrehin'ny sehatra politika ao Afganistana. Amin'ny fanakaikezana ny fifidianana amin'ny volana Aogositra, mitroatra any amin'izay mety ho mpifaninana amin'ny filoha Hamid Karzaï ireo tombantombana. Ilay fifanarahana, anivon'ireo analista amerikana, dia toa miseho manodidina ny hevitra hoe mizarazara loatra ireo antoko mpanohitra ka tsy azo heverina ho toy ny loza mitatao amin'ny famerenana fifidianana, saingy misy tanjona izany, hoy i Jengnameh : Nisafidy modely mifantoka amin'ireo Pachtounes ny Tandrefana, hoy izy.
Nanomboka tamin'ny 2001, nampiasa ny marika toy ny «radikaly, mpanao an-tendrony» na «andrianan'ny ady» ireo Karzaï sy ethno-nasionalista pachtounes mba hanilihana ireo tsy Pachtoune tsy ho ao amin'ny governemanta…
Izay no nahatonga ny vaovaon'ny mety hisian'ny fifanarahana eo amin'ny Hizb-e Wahdat sy ny Junbish-e Milli ho manan-danja tanteraka : mety haneho bolongana lehibe iray hahavita hisongona ny vato ho azon'ireo maro an'isa pachtounes mpomba ny filoha Karzaï izany.
Nandritra ny antsafa ho an'ny gazety natao tao Kaboul tamin'ny Sabotsy, nanambara ny fanohanany kandidà ira, na ho iza na ho iza izay, manomboka amin'ny herinandro ho avy io ireo mpitondra 18 avy amin'ny antoko roa. Nilaza ny filohan'ny Hizb e Wahdat, i Haji Muhammad Muhaqiq fa «amin'ny fototry ny fahatakarana goavana sy fiarahamiasa ifampizarana, nanapa-kevitra ny hiara-dia ireo antoko roa.» Samy tsy hanana kandidà atolotra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo antoko roa, fa hiaraka hanohana kandidà iray avokoa izy ireo. Afaka marihina fa lasa any Tiorkia efa roa volana izay ny lehiben'ny Junbish, ny jeneraly Dostom. Lazaina fa nanao sesitany ny tenany any izy.
Mifandray amin'ny zavatra teo aloha, antoko maro an'isa shiita hazara ny Wahdat, ary nandritra ny ady an-trano, vondrona moujahidin izay sady nanohitra ny Sovietika no nanohitra ny talibana ihany koa izy ireo avy eo.
Toa hihamafy hatrany ireo olana ara-politika atrehin'i Afganistana rarkarakyny hanakaikezan ny fifidianana : nanomboka naneho ampahibemaso ny tsy hafaliany manoloana ireo rafitra vaovao mba «hamerenana indray» ireo hetsika ara-tafika na ireo olo-malaza ao amin'ny governemanta, izay teo aloha nisalasala ny hihevitra ny politika amerikana aza. Tsy hay ny fomba hisehoan'izany eo amin'ny sehatra nasionaly sy eo an-toerana. Fa afaka mifanamby tsy misy risika isika fa hihamafàna ny resaka raha manakaiky ny 20 Aogositra.